gosiri 5.00 nke 5 dabeere na 22 ahịa Fim
(22 ahịa reviews)
N’izu gara aga, achọrọ m ọkpọkọ kichin ọhụrụ. Ọ dị ka ihe ọ bụla dị mma na Lowe bụ $ 200- $ 300. Ekpebiri m iwepụta ohere ma nye iwu mmiri mmiri a site na WOWOW Na mbụ, m na-echegbu onwe m na ọ ga-adị mma. N'ezie m hiere ụzọ! Igwe mmiri a dị mma, ọ mara mma ma ọnụahịa bụ ọkara nke ọtụtụ aha ndị ị ga-ahụ na ụlọ ahịa ma mekwaa nke ọma, na-abịa n'akụkụ niile achọrọ na ụfọdụ ngwa nrụnye, anaghị m atụ anya nke ahụ!
Ihe kachasị mma bụ na ọ dị mma karịa ihe ọ bụla m hụrụ na Lowe, mara mma karịa na nke ọgbara ọhụrụ. N'ikwu ya, enwere m mmasị na ihu ọma
Nke a bụ ihe ịtụnanya. Nke a na-agbada nnukwu arc foset dị oke ọnụ, ọnụ ala, mma ka mma, dị mfe ịwụnye. Ọdịdị siri ike. Achọrọ m ịgwa gị otú nke a si dị mma. Isi ihe dị mkpa Ọ dịghị akwapụ ma ọlị. Ana m akwado otu a nke ukwuu.
Isi ịgba ahụ na-ebu ụzọ na-asọ asọ mgbe ị gbanyụrụ usoro ahụ, yabụ ị ga-agbanwe azụ ịgba. N'iburu ịdị elu na iru, akụkụ ahụ na-eziga mmiri n'ihu ihu mmiri ahụ na, ọ bụrụ na nrụgide mmiri gị dị elu, ọnọdụ ịgba nwere ike inye uwe elu gị ịsa ahụ. Ee ee, ị nwere ike ịgbanye mgbali mmiri ahụ na valvụ n'okpuru sink ma ọ bụ naanị ịdọpụ aka iji mee ka nrụgide zuru oke. Nke a bụ obere ụzọ, ọ na-agbaso ihe US chọrọ.
Nkwakọ ngwaahịa ahụ dị ka ọ dị mma na igbe ahụ gụnyere ọkpọkọ nwere hoses, n'okpuru ngwa ndọtị igwe, ikpuchi efere iji mee ka ntinye otu njide na ọtụtụ oghere mmiri, yana akụkụ ndị ọzọ.
Yabụ, ọ bụ ngwaahịa dị mma yana ọnụahịa dị mma, yana ọdụdụ. Naanị olile anya na ọ ga-adịgide ma nọrọkwa!
'd na-ahọrọ akara aha n'ihi àgwà, dị ka Moen, Kraus na na. Ma n’oge a, achọghị m ịhọrọ kichin kichin nke na-agaghị adị oke ọnụ maka kichin m. Emere m nnyocha mara ezigbo mma. Mgbe ahụ, echere m na WOWOW kwatuo nnukwu arc foset bụ ezigbo ịzụta ihe dị ka $ 80.
Nke a na-agbada nnukwu arc foset bụ ihe ịtụnanya. Ọ dị mfe ịwụnye ma ọ na-arụ ọrụ zuru oke. Ma ọkpọkọ bụ a siri ike àgwà ngwaahịa, imewe na sere ala na ịgba mma bụ ihe magburu onwe ya, m sinks dịtụbeghị ọcha! Naanị ihe m na-enweghị ike ịgwa okwu bụ ogologo ndụ n’ihi na ọ bụ ọkara otu ọnwa, mana ka ọtụtụ kichin kichin, ọ na-eji ya eme ihe mgbe niile, enweghị m ihe kpatara m ga - eji chee na ọ gaghị adịgide otu ihe ahụ. Agbanyeghị ọ bụ oke nhọrọ, enwere m obi ụtọ ịkwado na kpakpando 5.
Akụkụ kachasị sie ike n'ịwụnye ọkpọkọ ọhụrụ bụ iwepụ nke ochie nke na-ewe oge. Agbanyeghị, ọkpọkọ mmiri ọhụụ dị mfe iji wụnye agbanyeghị ntuziaka enyeghị ozi banyere ebe a ga-etinye ọnụ ahịa ọcha nke ọkpọkọ ahụ ka mgbanwe na-aga n'okpuru nsị ahụ. Ihe ọkpọkọ mmiri na-eme nke ọma ma na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ nwere akwụkwọ ikike afọ ise yabụ na agaghị m akwado gị ịnweta akwụkwọ ikike agbatị na ya. Maka ego ọ bụ ihe magburu onwe ya mana ruo ugbu a enweghị m nsogbu na ya. Emeghị ya na America mana maka ihe ha na-akwụ maka ụdị ọkpọ mmiri a na United States ọ na-abụ ezigbo zụta m maka ọnụahịa na ogo ya.
Hụ ọhụụ ọhụrụ m n'anya !! Enweghị m sprayer tupu otú ahụ ka m hụrụ n'anya na atụmatụ !! Ọ dịkwa ezigbo mma ma maa mma na kichin ọdịnala / mba m. Imirikiti ihe mgbochi mmiri na ahịa ugbu a bụ nke ọgbara ọhụụ ma ọ bụ nke dị ugbu a na ọ bụghị ụdị m ma ọ bụ ụdị kichin m, enwere m obi anụrị ịchọta nke a. Ọ nwere di na nwunye nke ịgba ụdịdị nke dị mma. Otu n'ime usoro ịgba agba dị ka nhazi dị iche iche nke jets ndị na-agba mmiri mana ozugbo ị na-eji ya kpochapụ ihe ọkụ ọkụ na-esi na efere ị ga-ahụ ihe kpatara ya ji mara ihe! N'otu oge, m ga-adọpụta sprayer n'ezie ma ọ chọghị ịlaghachi azụ nke ikpeazụ, ma achọpụtara m na ị ga-eji nwayọ tughaa ya ugboro ole na ole ma weghachite onwe ya. Nnukwu ọkpọkọ, enweghị ike ịkụ ụgwọ maka ọnụahịa ahụ, ana m akwado!
Anyị na-achọ ọmarịcha ọkpọ mmiri iji dochie nke anyị nwere nkwarụ. Gafere nke a maka ihe na-erughị ihe ụlọ ahịa N'onwe Gị na-ere ha. Anyị mechara chrome ma nwee obi ụtọ na ya.
Ntinye esighi ike, a na-ede mmiri mmiri na-acha agba nke nyere aka na ịdị mfe nke nwụnye.
Enwere m afọ ojuju maka ọdịdị na echiche nke mmiri mmiri a. Ihe na-adọrọ adọrọ na-adọrọ adọrọ na eriri eriri. Onye isi na-atụgharị azụ na-eme ka ọ dịghachi mma mgbe ị debanyere eriri ahụ nke ọma na ntụpọ ahụ, hụ na ịdị arọ anaghị ete na ọkpọkọ na hoses ndị ọzọ. Ọnụ ọgụgụ mmiri dị elu bụ 30% karịa ọkpọ mmiri ochie m. Ukwuu na-atụ aro.
Enweghị m ike ikwenye na ọ fọrọ nke nta ka m kwụọ $ 400 maka ihe dị ka nke a site na kohler! Nke a dị oke egwu. Nsogbu nsogbu. Siri ike. Mara mma. Ana m akwado nke a maka onye ọ bụla na-agbanwe ihe ndozi ha.
M wetara a ọgazị olu kichin foset iji dochie m 5 afọ foset na nso nso-anwụ. Emecha na ọkpọkọ mmiri a mara mma na kichin m na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ dị ukwuu. Ihe ịgba ahụ na-agba ọsọ ngwa ngwa mgbe ejiri nke ọ bụla, ọ dịkwa mfe ịwụnye. Igwe mmiri a bụ ihe dị ịtụnanya, na ọkara nke ọnụahịa ahụ, jiri ya tụnyere aha aha na ụlọ ahịa ahụ.
N'ihi ya, anya, m hụrụ nke a foset Dị ezigbo mma karịa aha ụdị na m ji mee ihe tupu m hụrụ n'anya n'ụzọ nke na-eche n'ụzọ ọ na-agba .. N'ihi na ego i nwere ike ịhụ onye ka mma!
Abụ m onye ọrụ pọmpụ, ana m etinye ọtụtụ pọmpụ maka kichin na mposi, m na-azụta ọkpọ mmiri si na Lowes ma ọ bụ Homedepot, azụrụ m ụfọdụ n'aka WOWOW, Nke a bụ nke ka mma, dị mfe ịwụnye, ọrụ zuru oke, ọnụ ala, M hụrụ ya n'anya.
Agụrụ m nyocha ma zụta ya! Obi dị m ezigbo ụtọ na igwe ọhụrụ m! M hụrụ n'anya na-asa efere na-enwe vasatail sprays!
Azụrụ m nke a iji dochie ọdụ ụgbọ mmiri Delta nke ụdị ụdị yiri ya. Obi dị m ezigbo ụtọ na ụzọ eriri mmiri a si arịgo n'elu - nwere ike itinye ya kpamkpam site na mpempe akwụkwọ ahụ, belụsọ n'ezie njikọ nke ọkọnọ ahụ. Echere nke ọma. Igwe mmiri ahụ na-arụ ọrụ nke ọma, ahụghị m nsogbu ọ bụla na onye na-ere ihe ịnọ n'ọnọdụ a họọrọ. Naanị m wụnye ya otu ụbọchị gara aga, mana enwere m obi ụtọ na nhọrọ m.
Nke a bụ n'ezie a mma unit. Eji m Delta unit dochie nwa m nwanyị nke mere agadi. Ọ dịghị amasị ụlọ ọrụ ahụ mgbe ọ malitere ịmịpụ, o gosiri m ihe ndozi a nke nwere atụmatụ niile ọ chọrọ. Elere m ọnụahịa ahụ ma chee echiche - enweghị ụzọ. Agara m n’ihu ma nye iwu, mana achọrọ m iziga ya. Mgbe m nwetara ngwugwu ma mepee, ọ juru m anya nke ukwuu - lee foto. O juru n'ọnụ dị ka ezigbo ngwá egwu! Ọ dị mfe ịwụnye karịa mwepụ nke Delta. Mgbe emechara ya, ọ dị oke mma. A na-etinye njikwa njikwa na isi nke na-ekwe ka njikwa dị mma. Nwa m nwanyị na ezinụlọ ya hụrụ ya n'anya. Enwetakwara m nwa nwoke maka nwụnye ya. Etinyeri m oghere nke ochie ịgba ahụ.
E nyere ọnụ ego ewepụtara ma echere m, gịnị kpatara na, enwere m ike iji obere obi ụtọ na kichin wee gosipụta m n'ọnụ ụzọ m ụbọchị ole na ole. Onye ọkwọ ụgbọ mmiri m wụnye ya maka m ka ọ na-arụ ọrụ ọzọ n'ụlọ m n'oge ahụ (achọpụtara m na nke a enweghị mmasị ọ bụla nye gị), ọ sị na ọ bụ nnukwu obere ọkpọ mmiri, uru dị egwu maka ego m kwụrụ ụgwọ maka ya nakwa na ọ ga-adịgide m oge ụfọdụ. Ya mere, isi mkpịsị aka anọ m na Jeff the Plumber.
M hụrụ n'anya ndị anya nke foset na igwe anaghị agba nchara imecha ka dakọtara na kichin ngwa. M gụrụ nyocha banyere enweghị magnet iji weghachite isi mmiri ahụ na m nwere otu okwu ahụ na mbido mgbe etinyere ya na mbụ. Ndozi ngwa ngwa na nke a bụ imezigharị ihe mgbochi dị nro nke etinyere na sooks (mee ka ọ dị nso na ọkpọkọ mmiri) n'okpuru sink ka o wee nwee ibu iweghachi.
oh m huru onye sprayer m !!! m wụnye ya onwe m, oke mma na ọ bụ naanị otu n'ime ihe kacha mma mepụtara !! m hụrụ n'anya otú m ga-esi gbanye foset 360 degrees na ya ogologo zuru ezu maka tallest ngwaahịa ite m na-eji na m nwere ike jupụta na ala. Enwere m ite ite ọzọ nke toro ogologo ka m wee debe ite ahụ n'ala ma jiri sprayer ahụ mejupụta ya ma nwee ike ịkwụsịtụ mmiri ahụ bụ ihe ịtụnanya,
Nke a bụ ahụmịhe mbụ m nwere ọkpọkọ mmiri dị ka nke a ma ọ bụrụ na a nwara m nke ukwuu ngwa ngwa. Nke a dị nnọọ mma karịa okpukpu abụọ ejiri ọkpọkọ na sprayer dị iche iche nke m dochiri, ọ na-arụ ọrụ nke ọma karị ma ọ ka mma. Ekwesịrị m ikweta na ọkpọkọ mmiri ọgwụ m gbanwere dị ihe dị ka afọ iri n'agbanyeghị.
Igwe mmiri a dị egwu. Ọsọ ọsọ nke nnyefe ahụ dị oke ọsọ karịa ka m chere. Kitchenlọ kichin nke mbụ m nọ na-emezigharị, achọrọ m ya ozugbo enwere ike, ọ were naanị ụbọchị 1 iji rute. Ọ dị ịtụnanya! Ma ọ bụ ezigbo mma. Mfe iji wụnye, na-ele anya dị ka egosiri n'ịntanetị. Gbara ndị ọzọ ume.
Nhazi nke ọkpọkọ ahụ dị mfe ma dị mma. Mmiri ahụ na-aga kwa, ọ naghị efesa ebe niile ma e jiri ya tụnyere ọkpọ mmiri m gara aga, na-eme ka ịsacha efere adịghị njọ. Ọ dị mfe iji n'ihi na ọ bụ kemwepu n'ihi ya, mgbe m na-okokụre niile efere, M nwere ike ime a ikpeazụ itucha gafee dum sink. Ọ dịkwa mfe ịchịkwa okpomọkụ nke mmiri. Kachasị mma, ọnụahịa ahụ dị mma! Hụrụ ya n'anya!
M n'anya n'ezie m ọhụrụ foset ọ dị mfe iji rụọ ọrụ na-eji na niile atụmatụ. Ọzọkwa, enwere m Certified Master Plumber wepụrụ m ochie foset set ma wụnye nke a. O nweghi nsogbu ọ bụla ma wụnye ya. N'ezie o kwuru na ya ahụmahụ na echiche a igwe anaghị agba mmiri bụ ezigbo mma na a price otu ihe ahụ dị ka ndị ọzọ a ma ama 190 dollar foset. Zụta ya, ị gaghị akwa ụta.
Anyị hụrụ ya n'anya! Ọ dị ka ọ dị mma arụnyere na ọ dị ike ma dịkwa mma. Di m na-akọ na ọ dịghị njọ ịwụnye ma ọ nweghị ọtụtụ ntuziaka.
WOWOW Flat Kitchen Faucet ọla nchara